UNED FLANDERS UFUMANA EYAKHE I-SNEAKER ENKOSI KWII-ADIDAS - UHLOBO
UNed Flanders Ufumana eyakhe i-Sneaker Enkosi kwii-adidas
Hi-Diddily-Ho! U-Ned Flanders une-sneaker yakhe. Umntu oyimbonakalo yekhathuni ebaleka ixesha elide, IiSimpson , wenziwa ukuba afe ngokungagungqiyo kwifom yezihlangu. Umgaqo wabasekhohlo uphefumlelwe ngumboniso odumileyo wasekhohlo, owathi ngaxesha lithile kwimiboniso waba nevenkile ethengisa iimveliso, uqikelele, abantu abangamanxele.
IiSimpson x intsebenziswano ye-adidas ithatha isihlangu esidala seMcCarten kwaye yongeza ukubamba kukaNed. Okokuqala kwaziswa ngo-2017 njengenxalenye yeqoqo le-adidas Spezial, iMcCarten yinxalenye ye-sneaker, i-loafer yecala, kunye nokukhethwa komboniso weFlanders.
umthi we-viking wobomi be tattoo
izinto umntu ngamnye afanele ukuzithwala
Ukukhaba kwe-retro kufaka ipaneli esecaleni eluhlaza kunye nepinki ye-sock liner echaza utyikityo lweFlanders oluhlaza kunye nehempe epinki. Omnye umbala ogqwesileyo yi-brown suede kwi-toebox, ikhola, ulwimi, isithende, kunye ne-ultra-thin thin guard, ehlonipha i-Flanders yeenwele ezimnyama kunye namadevu.
Kukho uphawu oluncinci oluvela kwi-adidas, ngaphandle kwelogo encinci yegolide iTrefoil emelene nemitya yentambo kunye nenye engaphakathi yesikhumba yodwa. Ukuba oko akwanele, izihlangu ziza zifakwe kwibhokisi emfutshane ye-Leftorium enomfanekiso we-Flanders ophethe uphawu lwe-Left-Handers Rule kwaye ubandakanya i-hangtag yesikhumba.
iinwele ezimfutshane zamadoda aneenwele ezingqindilili
Ngelixa kungekho kukhululwa ngokusemthethweni eMelika okwangoku, i-adidas Left-Handers Rule iyafumaneka kwi adidas UK iwebhusayithi malunga ne- $ 90 USD.
Bona ngakumbi malunga - UJack Purcell vs UChucklors: Yonke into ekufuneka uyazi
shiya isimilo sendoda
gquma iitattoo zomlenze kubantu basetyhini
iflegi yaseMelika enemikhono epheleleyo
izimvo ezilula ze tattoo kubafana
ubude obuphakathi butyibilikise umva ngeenwele